Nikea - Wikipedia
I Nikea na Nisea dia tanàna niorina tamin'ny taona 300 tal. J.K. any ho any tany avaratra andrafan'i Anatolia na Azia Minora, Torkia ankehitriny. Ny fitondrana helenistika sy bizantina ary otomàna no nifandimby nanjaka tao amin'io tanàna io. Ankehitriny izy dia atao amin'ny teny torka hoe İznik. Amin'ny teny grika dia atao hoe Νίκαια / Nikaia izy. Amin'ny teny latina kosa dia atao hoe Nicaea i Nikea.
Moskea Yeşil Camii ao Iznik.
Fantatra indrindra io tanàna io tamin'ny fanaovana konsily roa tao aminy. Ny Konsily voalohany tao Nikea izay natao tamin'ny taona 325 dia konsily voalohany teo amin'ny fivavahana kristiana fa ny Konsily faharoa tao Nikea kosa dia konsily fahafito. Tao no nanoratana ny Fanekem-pinoana nikeana na Fiekem-pinoana niseana. Izy no renivohitry ny Empiran'i Nikea taorian'ny fahazoan'ny Tafiky ny Vokovoko (na Kroazady) ny tanànan'i Konstantinopoly tamin'ny taona 1204 hatramin'ny nahazoan'ny Bizantina ity farany tamin'ny taona 1261.
Sarin'ny Farihin'i Iznik avy eny amin'ny habakabaka
Ao amin'ny faritry ny tanàna torka atao hoe Iznik ny niorenan'ny tanànan'i Nikea ao amin'ny tendro atsinan'ny Farihy Askaniona (atao hoe Farihin'i İznik, ankehitriny), izay hodidinin'ny havoana maro ao avaratra sy ao atsimo. Avy amin'io anaraoa hoe Nikea io ny hoe Iznik. Ny mandan'ny tanàna ao andrefana dia manamorona ny farihy Askaniona, ka misakana ny fanaovana fahirano an-dranomasina nefa ahafahana mamatsy ny tanàna. Ny veleran'ny farihy dia ampy hisakana ny fanaovana ankivy an-dranomasina ary ny tanàna dia mivelatra ka ampy hisakana ny fanakarana ny seranan-tsambo amin'ny alalan'ny fitaovam-panaovana fahirano mety haorina eo amoron-drano.
Ny tanàna taloha dia nohodidinin'ny manda manana halava 3 km sy haavo 10 m. Nisy hady roa sosona manamorona io hady io amin'ny ilan'ny tanana misy tany fa tsy amin'ny misy rano. Misy tilikambo 100 izay nahafahana manara-maso ny manda. Nisy vavahady lehibe sy mavesatra amin'ireo rindrina amin'ny tany ka izany ihany no ahafaha-miditra ao an-tanàna. Ankehitriny dia nasiana faritra maro ahafahana mifamezivezy miditra sy mivoaka ny tanàna, nefa ny ampahany maro amin'ny rindrina tranainy dia voatahiry ka mahasarika ny mpizaha tany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikea&oldid=975504"
Dernière modification le 9 Oktobra 2019, à 09:35
Voaova farany tamin'ny 9 Oktobra 2019 amin'ny 09:35 ity pejy ity.